Ifoto yoBumbano ngoku iyafumaneka kwiWindows kwiFom yeBeta kaRhulumente | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ifoto yokuBambisana ngoku iyafumaneka kwiWindows
Ukuba siyazi ukuba kuhlaziyo olukhulu olulandelayo lweWindows, Microsoft iya kugxila kwicala lokuyila ngakumbi lenkqubo Ukusebenza obekunye nathi amashumi eminyaka, ukuba kukho usetyenziso esele lukhona kwiiMacs kwiiWindows, ezinje ngeFoto yokuBambisana, zonke iindaba ezimnandi kwabo bakhetha le OS kwiApple.
Ifoto yokuhlangana, nje nge-Design Affinity Designer, sele ikhutshelwe yona Khuphela kwi-beta kawonkewonke evulekileyo. Oku kubonisa ithuba lokuqala kubasebenzisi bePC ukufumana izandla zabo kumhleli wezithombe eziwonga amabhaso, ezazifumaneka ngaphambili kwiiMacs kuphela.
Ngotshintsho lweWindows kuwe ungqinelana neempawu kuloo Mac, ezibandakanya iziphumo zexesha lokwenyani, ukuhlela okungonakalisiyo, ukuqhubekeka kweRAW kunye nolawulo lokuphela kokuphela komgangatho. Ifoto yoBumbano yinkqubo eya kuthi ikunike konke ukuchaneka kunye nomgangatho ofunekayo ukuze wenze imifanekiso emihle kwikhompyuter yakho.
Ukuba kwi-beta, le nguqulo iza nenani leempawu ezikhoyo kuhlaziyo olukhulu olulandelayo lweFoto yoBumbano. Ezi zinto zi-funtion i-HDR ehambele phambili evelisa imifanekiso engama-32-bit egcweleyo, ukugxila ekubambeni ukuzisa ubunzulu kwimifanekiso edityanisiweyo, ukucocwa kwebhafu yokuhamba ngokukhawuleza komsebenzi kwaye ingaba yintoni indlela entsha yokuhlela imifanekiso kwiidigri ezingama-360.
U-Ashley Hewson, uMlawuli we-Affinity, uthi:
Xa saqala ukuphuhlisa ii -apps zethu zoMdibaniso malunga neminyaka esixhenxe eyadlulayo, elinye lamaqhosha lalikhona jolisa ekubeni ngamaqonga amaninzi, ke le beta linyathelo elikhulu kuthi. Ngenxa yokuba senze esi sicwangciso kwasekuqaleni, yonke ikhowudi yethu yokuphela, eyona ndawo iphambili ye-Affinity injini, ezimeleyo ngokupheleleyo kwinkqubo yokusebenza.
Ayithethi nje kuphela ukuba ukungqinelana phakathi kwamaqonga amabini yi-100% egqibeleleyo, kodwa zonke izinto ezinokubakho, ukusebenza, izixhobo kunye nokuchaneka okwenze ukuba le nkqubo idume kwi-Mac, bakwakhona balinde abasebenzisi IWindows
Unako fikelela kukhuphelo lwe-beta Ifoto yokuHlala kweli qhagamshelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Ifoto yokuBambisana ngoku iyafumaneka kwiWindows
Umzobi woMhlaba weBrandon, uMyili kunye noMzekeliso
Ukuthatha kunye nokuchonga imibala akukho nto ingcono kunePantone Studio